Tommy's Love Stories: ကျောင်းပြုံပင် - အပိုင်း၂
ကျောင်းပြုံပင် - အပိုင်း၂
“မောင်… ဒီဖုန်းထဲက မက်ဆေ့ခ်ျတွေက ဘယ်သူနဲ့ ပို.ထားတာလဲ” သဲ မျက်ရည်ဝဲရင်းမေးသည်။
“အော်…သဲ ကလဲ..စိတ်ပူတတ်ရန်ကော.. မင်းရည်းစားက ဖိုးစွံလေကွာ..ကိုယ့်ကို ကြိုက်နေတဲ့ အတန်းထဲက ကောင်မလေး တစ်ယောက်ပါကွာ..”
“မောင်ရယ်..ဟုတ်ကော ဟုတ်ရဲ့လား.. သဲကို ပစ်မသွားပါနဲ့နော်..”
“စိတ်ချ.. ကိုယ့်မိန်းမကို ပစ်စရာလား၊ ဟိုကောင်မလေးတွေက ဖွဲ၊ ဇကွဲ…”
သဲ ကျွန်တော့်ကို ယုံမှာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်ကလဲ ကျွန်တော်ပါဘဲ၊ ရည်းစားများရတာကို သဘောကျသည်။ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေ အများကြီးနဲ့ တွဲရတာကို ဂုဏ်ယူသည်။ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ ဖိုးစွံဆိုပြီး ကြွားချင်သည်။ အထူးသဖြင့် ယောကျာ်းလေး သူငယ်ချင်းတွေကို မင်းတို. ငါ့လောက်တောင် အဖြစ်မရှိဟု လက်ခမောင်းခတ်ချင်သည်။
သဲကိုလဲ တခါတခါ အရမ်းချစ်ပြီး၊ တခါတခါတော့ ချစ်ရတာ ပျင်းသည်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော် လိုချင်တာ မရချိန်တွေဆို တော်တော် စိတ်ကုန်မိသည်။ ဒါပေမယ့် ၃နှစ်တောင် တွဲခဲ့ကြတဲ့ သံယောဇဉ်ဆိုတာကလဲ နည်းနည်းနောနော မဟုတ်ဘူးလေ စိတ်ကုန်တယ် စိတ်ပျက်တယ်အော်ပြီးလဲ ဆက်ချစ်နေသေးတာဘဲ… သူမက ကျောင်းရဲ့ နာမည်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာလဲ ပါတာပေါ့လေ..
“သဲ…. အ၀တ်လဲတော့လေကွာ.. ဒီချိန်ထိ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလား”
“မောင်… သဲ Night Club ဆိုတာ မသွားရဲဘူး.. တခါမှလဲ မရောက်ဖူးဘူး…”
“အာ… မရဘူး… သဲ ပြောတော့ မောင် Club ကို သွားသွားနေတာ ..စိတ်မချဘူးဆို.. သဲကိုယ်တိုင် လိုက်ခဲ့လေ..”
“မောင်ကို ယုံပါတယ်..ကောင်မလေးတွေကိုဘဲ မယုံတာ..”
“တော်ကွာ..စကားများမနေနဲ့ ခုချက်ချင်း အ၀တ်လဲ.. ၁၅မိနစ် အချိန်ပေးမယ်..
ဒါနဲ့… တီရှပ်နဲ့ ဂျင်း ပုံတုံးတုံးကြီး ၀တ်မလာနဲ့နော်… ကိုယ်ချစ်သူကို ကြွားရဦးမှာ… လန်းလန်းလေး ၀တ်ခဲ့.”
ကျွန်တော်က တခါတခါ အဲလိုဘဲ ကိုယ့်ဇာတ်လဲ ကိုယ်မနိုင်ဘဲ သဲကို အနိုင်ကျင့်တတ်တယ်.. အမှန်တော့ Club မှာ ဂျူးဂျူးဆိုတဲ့ နောက်ကောင်မလေးတစ်ယောက်က စောင့်နေတာ… ဘာလို.ရယ်မသိ သဲကို အနိုင်ကျင့်ချင်တာနဲ့ အတင်း Club ခေါ်သွားခဲ့သည်။
Night Club အ၀င်ဝမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို ကြည့်ရင်း သဲနုတစ်ယောက် ၀င်ရမှာ လန်.နေသည်။
မောင့်ကို ချစ်လွန်းလို. လိုက်လာခဲ့ရပေမယ့် ဒီလိုနေရာကို လာဖို. အိပ်မက်တောင် မမက်ဖူး…
Security အမျိုးသား ၂ယောက်ရဲ့ မျက်လုံးတွေက ကြည့်နေလိုက်တာ လူကို စားမတတ်ဝါးမတတ်..
“Shit.. ဘာဖြစ်ရပြန်တာလဲကွာ….ကိုယ် ၀င်ကြေးပေးပြီးပြီကွ.. မင်းမလိုက်ချင်လဲ ကိုယ်ပြန်လိုက်ပို.မှာ မဟုတ်ဘူး.. ဒီကနေ တစ်ယောက်ထဲ ပြန်ရဲရင်တော့ သဘောဘဲ”
မောင့်စကားတွေက ရင့်လိုက်တာ… သူစိတ်ဆိုးသွားပြီထင်တယ်.. သဲချစ်သူက တခါတခါ စိတ်ဆက်လွန်းတယ်..
“ Sorry မောင်… သဲလိုက်ခဲ့မယ်.. “
“ပြီးရော…” စကားကို ခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောရင်း သဲလက်ကို ဆောင့်ဆွဲကာ Club ထဲသို. ၀င်ကြသည်…
“~~ အိုးလေး လှုပ်ပါဟေ့…ရေအိုးလေးလှုပ်ပါဟေ့…~~
Club ထဲမှာ စိုင်းစိုင်းရဲ့ သီချင်းအချို.က မြူးကြွနေသည်… မှောင်တစ်ဝက် လင်းတစ်ဝက်ဖြစ်နေတဲ့ Disco မီးရောင်အချို.က စိတ်ကိုတော့ လှုပ်ရှားတတ်ကြွစေသား…
ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ မောင့်ရဲ့လက်က သဲကြောက်စိတ်တွေကို ဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်း၇ှိတယ်လေ...
Club ထဲမှာ လူငယ်တွေ တော်တော်များသည်။ တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့ အေးအေးဆေးဆေးဘဲ စကားပြောနေကြသည်။ ဘယ်သူ.ဘယ်သူမှလဲ နှောင့်ယှက်ချင်း မတွေ.ရပါ။ သဲ နဲနဲတော့ စိတ်အေးရသည်။
“အာ.. ချစ်သူကလဲ လုပ်ပြန်ပြီကွာ.. Club လာပြီး လိမော်ရည်သောက်ရတယ်လို. Vodka လောက်တော့ နဲနဲရောပါ..”
“မလုပ်ပါနဲ့ မောင်ရယ်.. သဲ တစ်ခါမှ အရက်မသောက်ဖူးဘူး… အမေတို. သိရင်လဲ သတ်လိမ့်မယ်…”
“Ok OK….ကိုယ်ချစ်သူလေး သဘော…”
“အစ်ကိုရေ… လိမော်ရည်တစ်ခွက်.. ကျွဲရိုင်းနဲ့ vodka ရော တစ်ခွက်..” ကောင်တာကို မောင် သောက်စရာမှာနေတာ ငေးကြည့်နေမိသည်…
သဲချစ်သူက သိပ်ကြည့်ကောင်းတာဘဲ…ယောက်ျားလေးလို. နေတော့လဲ အရမ်းဆွဲဆောင်မှု ရှိသလို.. မိန်းကလေးလိုနေရင်လဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးဖြစ်နိုင်သည်..
“ဟိတ်…ဘာငေးနေတာလဲ…” ရုတ်တရက် မောင် ကစလိုက်တော့ သဲနဲနဲရှက်သွားသည်။
“ဟားဟား… ငါ့မိန်းမက မြှောက်နေပြန်ပြီ… “ မောင်က ခပ်ကျယ်ကျယ်ရယ်ရင်း သူမကို ဖက်နမ်းသည်… လူမြင်ကွင်းမှာ အဲလို တခါမှ အနမ်းမခံဖူးတော့ တော်တော် ရှက်မိသည်…
“မောင်ကလဲ… အဲလိုမလုပ်နဲ့ မကြိုက်ဘူး”
“လူတွေကြားထဲမှာ သဲကို အဲလိုမလုပ်နဲ့..မကြိုက်ဘူး..”
“အော်..မင်းက လူတွေကြားထဲ မိန်းမချင်းနမ်းခံရလို. ရှက်တယ်ပေါ့”
“ဟာ..ဘာမှလဲ မဆိုင်ဘူး… မိန်းမချင်းနမ်းခံရလို. ရှက်တာမဟုတ်ပါဘူး… လူတွေကြားထဲ မို.လို.ပါ..”
“တော်စမ်းပါကွာ… မင်း လူတွေရှေ.မှာ ငါနဲ့တွဲရတာ ရှက်နေတာ မဟုတ်လား…” မောင် မူးပြီး စွတ်အော်သည်။
တချို.လူတွေက သဲတို.၂ယောက်ကို ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့်လုပ်နေကြသည်။
“honey, I miss you..”
အနီနဲ့ အနက်ရောင် ခပ်ကျပ်ကျပ် ၀တ်စုံကို ၀တ်ထားပြီး၊ ဆံပင် ရွှေရောင်ဆိုးထားပြီး အရမ်းလှသည်ဟု ပြောလို.ရတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်…
မောင့်ပခုံးပေါ် လက်၂ဖက်တင်ပြီး၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေအထားကို သူမဘက်လှည့်ယူသွားသည်။ ပြီးတော့ သူမနှုတ်ခမ်းတွေက သဲ တမြတ်တနိုးထိတွေ.ခဲ့ဖူးသော နှုတ်ခမ်းအစုံသို.
“မောင်…ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ…” သဲ… တုန်ရီစွာမေးမိသည်…
တချိန်တည်းမှာပင် “Honey, သူက ဘယ်သူလဲ…” သဲချစ်သူကို ပိုင်စိုးပိုင်နင်း ပွေ.ဖက်ထားသော ထိုအမျိုးသမီးကမေးသည်..
မောင်က ခပ်အေးအေးပင် …”ဒါက သဲနု… ကိုယ့်ချစ်သူလေ.. “ “သဲ..ဒါက ဂျူးဂျူး…သူက ကိုယ့်ရဲ့ Partner..”
“Sorry သဲ…ဒီစကားလုံးက သဲအတွက်တော့ နားအ၀င် သိပ်လှဦးမှာမဟုတ်ဘူး.. သေချာတာကတော့ သူက မင်းမပေးချင်တာတွေ ကိုယ့်ကိုပေးတယ်… “
“ံHoney, မင်းချစ်သူက ယုန်လေးနဲ့ တူတယ်နော်…” ဂျူးဂျူးက မူးမူးနှင့် သဲဆံပင်ဖြောင့်ဖြောင့်လေးတွေကို ဆော့ကစားရင်း မှတ်ချက်ချနေသည်။
“မောင်” သဲဘာမှ မပြောတတ်တော့.. တယုတယချစ်တတ်တဲ့ အလိုမကျရင် စိတ်ကောက်တတ်တဲ့ ချစ်သူမှာ Partner လို.ခေါ်တဲ့ အခြားမိန်းမတစ်ယောက်ရှိနေတယ်တဲ့… မိဘတွေကို ဆန်.ကျင်ပြီး၊ အရမ်းချစ်ခဲ့ရတဲ့ ချစ်သူက အခုတော့ သူ.ရှေ.က မိန်းမနဲ့ ရင်ချင်းအပ်ပွေ.ဖက်နေကြတယ်….. မျက်ဝန်းထဲက မျက်ရည်တွေ ပါးပေါ် တရစပ်ကျလာမှာ ငါငိုနေမိပါလားလို. သတိထားမိတယ်… မောင်ကတော့ ထိုအမျိုးသမီး ခေါ်ဆောင်ရာနောက်သို. တရွေ.ရွေ.
Posted by Tommy Girl at 5:51 AM
First Love - Chapter 2
First Love - Chapter 1
Girls' House - Chapter2(Final)
New Roommate - Chapter5(Final)
New Roommate - Chapter 4
New Roommate - Chapter 3
New Roommate - Chapter 2
New Roommate - chapter 1
ကျောင်းပုံပြင် - အပိုင်း ၅ (ဇာတ်သိမ်း)
ကျောင်းပုံပြင် - အပိုင်း ၃ & ၄
ကျောင်းပုံပြင် - အပိုင်း ၁
Love Trip - Part3(Final)
Love Trip - Part 2
Love Trip - Part 1
Girls' House - Chapter 1
Flame of Love (17)
Ghost Girl & Me (3)
Girls House (2)
Little Ghost Star1 (1)
Love Trip (3)
New Roommate (5)
School Story (4)
Ticketing Girl (1)
Vampire Lover (3)
နံနက်ခင်းရဲ့ ဆောင်းရာသီ (1)